China Sansevieria Golden Flame Plant For nhicha The ụlọ ọrụ ikuku na ndị nrụpụta | Anwụ na-acha Ifuru
Sansevieria Golden Flame Plant Maka Ihicha Ikuku
Sansevieria na-arụ ọrụ dị mma n'ime ka ikuku dị ọcha. Nnyocha egosiwo na sansevieria nwere ike itinye gas dị n'ime ụlọ, ma nwee ike wepu sọlfọ dioxide, chlorine, ether, ethylene, carbon monoxide, nitrogen peroxide na ihe ndị ọzọ na-emerụ ahụ.
Sansevieria bụ ụlọ ihi ụra. Ọbụna n'abalị, ọ nwere ike ịmịkọrọ carbon dioxide ma hapụ ikuku oxygen. Ọkpụkpụ isii dị elu n'úkwù nwere ike igbochi nnabata oxygen. Ugbo ulo nke sansevieria na icheku oku nke nkpuru osisi nwere ike obughi nani ime ka oru ndi mmadu karie, kamakwa belata ikuku windo na oge okpomọkụ.
Size: MINI, Obere, MEDIA, nnukwu
Nkọwa nkwakọ ngwaahịa: okwu osisi, na igbe ụkwụ Reefer 40, yana ogo 16 ogo.
Potted sansevieria anaghị achọ nnukwu ọkụ, ọ bụrụhaala na ọkụ adịchaghị oke.
Sansevieria nwere mgbanwe siri ike, ọ bụghị nke siri ike na ala, enwere ike ijikwa ya karịa.
Sansevieria nwere mmegharị siri ike, ọnọdụ kwesịrị ekwesị maka uto bụ 20-30 and, na ọnọdụ okpomọkụ karịrị 10 ℃. Ọnọdụ okpomọkụ n'oge oyi ekwesịghị ịdị ala karịa 10 ℃ ruo ogologo oge, ma ọ bụghị na isi ihe ọkụkụ ahụ ga-ere ma mee ka osisi ahụ dum nwụọ.
Shouldgbara kwesịrị ekwesị, na nna ukwu ụkpụrụ kama akọrọ karịa mgbochi mmiri. Jiri mmiri dị ọcha na-ehichapụ ájá dị n'elu akwụkwọ iji mee ka akwukwo ahụ dị ọcha ma na-enwu gbaa.
Sansevieria anaghị achọ fatịlaịza dị elu. Ọ bụrụ na etinyere fatịlaịza nitrogen ogologo oge, akara akara na epupụta ga-ebelata, ya mere, a na-ejikarị fatịlaịza emeju eme ihe. Fatịlaịza ekwesịghị ịkarị oke.
Nke gara aga: Sansevieria Hahnii
Osote: Ficus Formosan Maxim Ficus Retusa Taiwan Ficus Bonsai
Potted Sansevieria Osisi
Sansevieria Osisi Bonsai
Ornamental Bonsai Osisi nke Ginseng Ficus Micro ...